Newcastle United oo haddii ay Sucuudigu la wareegaan noqonaysa kooxda dunida ugu qanisan (Waxay 50 & 10 jeer ka lacag badnaanayaan PSG & Man City) | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha Newcastle United oo haddii ay Sucuudigu la wareegaan noqonaysa kooxda dunida ugu...
Newcastle United oo haddii ay Sucuudigu la wareegaan noqonaysa kooxda dunida ugu qanisan (Waxay 50 & 10 jeer ka lacag badnaanayaan PSG & Man City)
(Newcastle) 07 Okt 2021 – Newcastle United ayaa noqon doonta kooxda dunida ugu taajirsan haddii uu hirgalo heshiis ay £300m oo gini ugula wareegayaan Dallad uu leeyahay Sucuudigu.
Sucuudiga oo ka gar baxay horyaallo kala duwan oo ay ku jiraan Serie A, Premier League iwm oo ay qaab xatooyo ah uga qaadanayeen beIN Sports oo ay Qadar leedahay ayaa qarka u saaran inay soo af jaraan taladii Mike Ashley, kaasoo 14-sanadood lahaa kooxda Magpies oo ay taageerayaashu aad u dhibsadeen.
Newcastle United ayaa haddii ay la wareegto dalladdan uu hoggaaminayo Dhaxal-suge Mohammed bin Salman, waxay noqonaysaa kooxda dunida ugu taajirsan, waayo waxay dalladani haysataa raasumaal gaaraya £320 bilyan oo gini.
Waxay taasi ka dhigan tahay in ay 10 jeer ka hanti badnaanayaan milkiilayaasha Man City oo ugu soo dhow oo haysata £23.2 bilyan oo gini, halka ay 50 jeer ka dakhli badnaanayaan PSG oo la ordaysa £6.5 bilyan oo qura.
Haddii heshiiska la dhameeyo, dalladda Sucuudiga ah ayaa la wareegaysa saami gaaraya 80%, halka Amanda Staveley iyo Reuben Brothers ay si siman u qaybsanayaan 20% soo haray.
Sheikh Mansour oo ah RW Xigeenka Imaaraadka isla markaana ka mid qoyska xukuma Abuu Dabeey oo Man City iska leh ayaa awal ahaa ninka ugu taajirsanaa kooxaha EPLhad topped the list as the wealthiest owner in world football
Previous article”Waxaan Al-aqsaa ku dhex dukanaynaa annagoo aamusan!” – Maxkamad Israeli ah oo soo saartay xukun gardarro ah (Hal dal oo Muslim ah oo ka hadlay)
Next articleDEG DEG: Axmed Fiqi oo iska casiley Wasiirkii Amniga Galmudug (Maxay isku fahmi waayeen?)